FAMPIVONDRONANA : Hamaritra ny ho avin’ny mpanazatra vaovao ny lalao hatrehan’ny Barea
Andrasan’ny maro fatratra ny lalao voalohany iarahan’ny mpanazatra ny Barea vaovao, Eric Rabesandratana. 15 septembre 2021
Io no hamaritra ny ho avin’ity mpanazatra ity sy hamaritra ny ho avin’ny ekipam-pirenena Barea izay tarihiny, ankehitriny. Nivoaka omaly alarobia ny lisitr’ireo mpilalao nofidian’ity mpanazatra ity hiatrika ny fampivondronana amin’ny alatsinainy izao. 35 izy ireo saingy tsy tao anatiny i Bolida sy Metanire.
Nanaitra ny maro fa tsy anisan’ireo 35 lahy nantsoin’ny mpanazatra hiatrika ny fampivondronana eto an-tanindrazana i Bolida izay efa kapiteny mpisolo toerana an’ny Barea nandritra ny lalao indray mandeha nihaonan’ny Barea sy ny Ivoariana tany an-taniny sy ny lalao nihaonana tamin’i Ethiopie tany an-taniny ary ny lalao nihaonana tamin’i Niger tatsy Barikadimy.
Nanana ny nambarany moa omaly ny mpanazatra momba io safidy io, izay toa milaza ihany fa tapitra hatreo ny an’ity mpilalao ity raha olana ara-taratsy(visa) kosa no tsy niantsoana an’i Romain Métanire. Lavitra ity farany, any Etazonia ka izay no antony kanefa mbola fiofanana ihany ity hatrao ity fa amin’ny fotoan-dehibe dia mety ho eo ihany izy.
Tanora sy avy eto an-toerana
Raha ny hita, sy araka ny fanazavan’ny mpanazatra nandritra ny famoahana ny lisitra, ireo tanora niampy ireo ekipam-pirenena sasantsasany avy eto an-toerana no tena nofidiana ny nomena sehatra tamin’ity safidy ity. “Mbola fampiofanana, fifankahafantarana ary fanomboham-piarahana­ rahateo no hatao ka dia nahoatra ny isa mahazatra ny nantsoina. Mba hahafahana maka antonony dia naka nihoatra. Betsaka ireo vao sambany no voaantso amin’izany fampivondronan’ny ekipam-pirenena izany, ao ihany koa nefa ireo zoky teo aloha, tsy azo ihodivirana na dia efa madiva ho tonga eo amin’ny taonan’ny aoka izay aza.
Nanamafy hatrany moa ingahy mpanazatra fa amin’ny fotoana manaraka vao tena hivoaka ny ofisialy fa amin’izao aloha, tsara raha tonga daholo ireo mba hahafahana manao izay safidy izay. Anisan’ny mbola mampanahy ny amin’i Rayan Raveloson noho ny fahalavirany ihany koa kanefa dia nantsoina ihany aloha izy. Ankoatra ireo, saika tazana ao avokoa ireo mpilalao zokiny efa nandray anjara tamin’ny CAN andiany faha-32 sy niatrika ireny fifanintsanana nisy lalao enina tsy nahatafakarantsika ho amin’ny dingana farany niaraka tamin’ny mpanazatra Nicolas Dupuis ireny.
Samy manana ny fironany
Ahitana andiany roa miavaka tsara ny mpankafy ny kitra malahgasy ankehitriny : an-daniny ireo mbola manina ny tongolon’i Ejypta ka tsy mahalala biby afa-tsy ny sahona, mbola te hanohy ny fiarahana amin’ny mpanazatra teo aloha, ka na inona na inona mety hataon’ny ankehitriny dia kianina foana. An-kialny kosa ireo resy lahatra amin’ny rivo-panovana ka miaiky fa rehefa tsy nahomby ny teo aloha dia ilaina ny rivo-baovao indray. Io rivotry ny fanovana io no iainana sy fohina ka tsy ankitodika ny lasa fa ny ho avy no banjinina. Mbola tena ao anatin’ny tsy fahalalana firy ireo mpilalao nantsoiny ireo akory ingahy mpanazatra vaovao fa ny fahitalavitra no tena nanampy azy tamin’ny fifantenana. Mbola tsy hay koa aza hoe, iza avy ireo hanaiky ? Firy amin’ireo nantsoina no hanoina ny antso.
Tsy isalasalana angamba aloha ny avy eto an-toerana fa ireo avy any ivelany no tena mahatsindriandaona.­ Na inona nefa na inona, ny ekipam-pirenena mitoetra fa ny mpitantana ny federasiona sy ny mpanazatra mandalo ihany. Hasakasak’izay tsy mametraka tantara tsara. Noho izany, adidin’ny mpankafy kitra ankehitriny ny mamela any anjorom-bala ny tsy fitovian-kevitra vokatry ny olana politika sy ny antony samihafa fa ny banjinina, misy tanjona io dia ny hahazo ny tapakilan’ny “mondial” 2022 hotanterahina any Qatar. Efa voaporofo tamin’ny lasa fa ny Barea dia mampitambatra, sanatria dia ho ny Barea indray no hampisaraka amin’izao ? Mba ho nofy kosa angamba izany.
Hiara-tonga ny avy any ivelany
Amin’ny alatsinainy 7 jona izao no ho avy ingahy mpanazatra Eric Rabesandratana sy ireo tekiniasiana miaraka aminy ary ireo mpilalao rehetra avy any ivelany izay afaka amin’ireo nantsoina ireo. Hiatrika fampivondronana eto an-tanindrazana izy ireo hatramin’ny 17 jona ka ny trano fandraisam-bahiny hitobiany dia ny Ibis Ankorondrano. Tsy mbola hay kosa ny kianja hanatanterahany izany fanazaran-tena izany.
Ny nambaran’ny mpanazatra omaly kosa, betsaka ny hevitra ao an-dohany fa ny fotoana no hahitany ny mety hampiharana ireny ; eny fa na dia ny paikady handrafetana ny ekipa fotsiny aza. Hahay hanaraka izay sainiko ve ny mpilalao sa izaho no hanara-bolontany, hoy izy. Hamaritra zavatra betsaka ny fahatontosan’io fiofanana io satria eo vao hifamantatra ny an-daniny sy an-kilany. Tsy ho diso anjara koa nefa ny mpankafy. Mikasika ny hisian’ny lalao tsapa kosa amina ekipa avy eto an-toerana ihany dia eo isika mahita ny tohiny, hoy hatrany ity tekinisianina ity
Ireto izy 35 mirahalahy natsangan’ity mpanazatra vaovao ity hiatrika ny fampivondronana voalohany :
Adrien Melvin(Louhans-Cuise­aux FC/France)
Randriamamy Mathyas Todisoa François(PSG/­France)
Rakotoasimbola Zakanirina(AS Adema)
Mombris Jérôme(Grenoble Foot 38/Fce)
Morel Jérémy(Lorient FC/­Fce)
Razakanantenaina­ Pascal(Saint Pierre/Réunion)
Ouassiero Jean Sylvio François(CS Fola ESCH/Luxembourg)
Ramanjary Theodin(Fosa Junior)
Rajaonison Andry Onny(AS Adema)
Raveloson Rayan Ny Aina Arnaldo(La Galaxy/USA)
Amada Ibrahim(Al Markhya/Qatar)
Randriambololona Zotsara(FC Fleury/Fce)
Caloin Dimitry(FC Fleury/Fce)
Andriarimanana Andriamirado Aro Hasina(Saint Pierre/Fce)
Lapoussin Loïc(RU Gilloise/­Belgique)
Rakotoritso­a Solonjatovo Jean Aimé(Jet Kintan)
Rakotoharimalala Njiva(Nongbua FC/Thailand)
Andriamahitsininoro Carolus(Al Qadsiah/Arabie Saoudite)
Ramanamahefa Falihery Ferdinand(Voltigers Chateaubriant/­Fce)
Randriatsiferana Toky Nantenaina(Ajesaia)
Rakotonirina Jena François(Five Fc)
Ramalingom Alexandre(FC Swift/Luxembourg)
Abdallah Hakim(K.Lierse SK/Belgique)
Voavy Paulin(Misr Al Makassa/­Egypte)
Razafindrasata Tsito(Jet Kintana)
Rakotonomenjanahary John Baggio(Port Fc/Thaïland)
Gros William(FC Fleury/Fce)
Rakotondraibe Tafitataina Angio Fabrice(St Denis FC/Réunion)
Raheriniaina Ahmad El Hadary Ylan Clovis(Ajesaia)
Hasinirina Onjaniaina Patrick(AS Adema)
Ranaivo Harison Aristide Vévé(Five FC)